ससुराले बलात्कारको प्रयास गरे पछि……. – Hamropati.com
ससुराले बलात्कारको प्रयास गरे पछि…….
प्रकाशित मिती: 08-15 at 7:36am
वीरेन्द्रनगरमा पछिल्लो समय महिलाहरु घर,परिवारका आफन्तजनहरु बाटै बलाल्कारको शिकार बन्न थालेका छन् । आफ्नै घरभित्र त्यो पनि आफ्नैबाट महिलाहरु यौनजन्य हिसां खेप्नु परेको छ ।
सुर्खेतमा केही दिन अघि आफ्नै ससुराले बुहारीलाई पटक पटक बलाल्कार गरेपछि घर भित्र र आफ्न्तजन हरु बाटै महिलाहरु असुरक्षित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी सुर्खेतले सरकारी कर्मचारी समेत रहेका ससुराले यही महिना २४ गते आफ्नै बुहारीलाई पटक पटक बलाल्कार गरेको आरोपमामा पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार ससुराले बुहारीलाई पटक पटक यौनजन्य हिंसा गर्दै आईरहेका थिए ।
जिल्ला प्रहरीका कार्यालय सुर्खेत डिएसपी बहादुरजंग मल्लले ती ससुरालाई बुहारीको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरेको जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार ससुराले बुहारीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको यौनजन्य अंगहरु देखाउने जस्ता यौन हिंसा गर्दै आएका थिए । ससुराले दिन प्रति दिन केही त्यस्तो व्यवहार गर्न थालेपछि बुहारी साउन २४ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरीसहितको उजुरी दिइन । किटानी जाहेर पछी सुर्खेत प्रहरीले बुहारीमाथि यौनजन्य हिंसा गर्ने सरकारी कर्मचारी समेत रहेको ससुरालाई यही महिना कै २४ गते पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ परेका ससुरालाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको डिएसपी मल्लले बताए । डिएसपी मल्लका अनुसार ती व्यक्ति सुर्खेतकै बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयका कर्मचारी हुन भने उनका छोरा (पडित महिलाका देवर) प्रहरी हुन । नागरिक सुरक्षा गर्ने प्रहरीकै घरमा ससुरा बाट बुहारी यौनजन्य हिंसाबाट पिडित हुनुले प्रहरीकै घरमै पनि महिला हिंसा असुरक्षित रहेको पाइएको डिएसपी मल्लले बताए ।